Genesisy 19 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
19 Ary tonga tao Sodoma ireo anjely roa nony takariva. Nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma+ i Lota tamin’izay. Koa raha vao nahita azy roa lahy izy, dia nitsangana hitsena azy, ka niankohoka tamin’ny tany.+ 2 Ary hoy izy: “Mba mivilia re, tompoko, ho any an-tranon’ny mpanomponareo, raha sitrakareo, ka matoria any anio alina, ary aoka hosasana ny tongotrareo.+ Avy eo dia afaka mifoha maraina ianareo ka manohy ny dianareo.”+ Dia hoy ireo: “Tsia, fa eo an-tany malalaky ny tanàna izahay no hatory.”+ 3 Niangavy azy mafy anefa i Lota.+ Koa nivily nankao aminy izy ireo ka niditra tao an-tranony. Ary nanao sakafo be ho azy ireo izy,+ sady nanao mofo tsy misy lalivay.+ Dia nihinana izy ireo. 4 Raha mbola tsy natory anefa izy ireo, dia nanodidina an’ilay trano ny lehilahy tao an-tanànan’i Sodoma,+ hatramin’ny ankizilahikely ka hatramin’ny lahiantitra. Nanao rodobe nila ady izy rehetra.+ 5 Ary niantsoantso izy rehetra sady niteny tamin’i Lota hoe: “Aiza ireo lehilahy nankao aminao androany alina? Avoahy atỳ aminay izy mba hanaovanay firaisana.”+ 6 Dia nivoaka nankeo amin’izy ireo teo am-baravarana i Lota, ka nohidiany ny varavarana. 7 Ary hoy izy: “Miangavy anareo aho, ry rahalahiko: Aza manao ratsy re e!+ 8 Manan-janaka roa vavy aho. Ary mbola tsy nanao firaisana tamin-dehilahy mihitsy izy roa vavy.+ Koa aoka re izy mirahavavy no havoakako eto aminareo, ka ataovy aminy izay mety eo imasonareo e!+ Fa ireo lehilahy ireo kosa aza atao na inona na inona,+ satria ny hiarovana azy indrindra no antony nankanesany ato amiko.”*+ 9 Dia hoy ireo: “Mialà teo ianao e!” Ary hoy koa ireo: “Tonga hivahiny+ eto io lehilahy mitokantokana io, nefa mba miseho ho mpitsara.+ Mbola ho ratsy kokoa noho ny hataonay aminy no hataonay aminao.” Dia nanosika mafy+ an’i Lota ireo ka nisesika hamaky ny varavarana.+ 10 Koa natsotran’izy roa lahy ny tanany ka nosintoniny hankao aminy ao an-trano i Lota, dia nohidiany ny varavarana. 11 Fa nataony jamba kosa ireo lehilahy tao am-baravarana,+ hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra,+ ka sasatra nitady ny varavarana izy ireo.+ 12 Dia hoy izy roa lahy tamin’i Lota: “Mbola misy havanao ve eto? Ento miala eto izay vinantolahinao sy zanakao lahy sy zanakao vavy ary izay rehetra anao eto amin’ity tanàna ity!+ 13 Fa handrava ity toerana ity izahay, satria nihamafy ny fitarainana momba azy, tonga teo anatrehan’i Jehovah.+ Koa nirahin’i Jehovah handrava ity tanàna ity izahay.”+ 14 Dia lasa i Lota, ka niresaka tamin’ireo vinantolahiny izay efa haka vady an’ireo zanany vavy. Ary hoy izy: “Mitsangàna! Mialà amin’ity toerana ity, fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity!”+ Noheverin’ny vinantolahiny ho nivazivazy anefa izy.+ 15 Nony nazava ratsy anefa ny andro, dia notenenin’ireo anjely i Lota mba tsy hitaredretra, ka nataony hoe: “Mitsangàna! Ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto aminao,+ sao ho faty noho ny fahadisoan’ity tanàna ity ianao!”+ 16 Ary raha mbola nitaredretra i Lota,+ dia notantanan’izy roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy, noho ny fangoraham-pon’i Jehovah taminy.+ Ary nentiny nivoaka izy ka nateriny teo ivelan’ny tanàna.+ 17 Ary raha vao tongan’izy roa lahy teo an-tsisin’ny tanàna izy ireo, dia niteny taminy ny iray tamin’izy roa lahy hoe: “Mandosira hamonjy ny ainao!+ Aza mitodika any aoriana,+ ary aza mijanona na aiza na aiza eran’ny Faritr’i Jordana!+ Mandosira any amin’ny faritra be tendrombohitra, sao ho ringana ianao!”+ 18 Ary hoy i Lota tamin’izy ireo: “Aoka re mba tsy ho izany, Jehovah ô! 19 Azafady re e! Efa mba nahazo sitraka taminao ihany ny mpanomponao,+ ka vao mainka nanehoanao hatsaram-panahy feno fitiavana+ mba hitsimbinana ny aiko.*+ Izaho anefa ity tsy afa-mandositra mankeny amin’ny faritra be tendrombohitra, sao ho tratran’ny loza aho ka ho faty.+ 20 Azafady re e! Akaiky handosirana irỳ tanàna kely irỳ, ka hahasarotiny anao ve ny handosirako ao?+ Mba afaka mandositra ao ve aho, azafady? Dia tena hahasarotiny anao ve izany? Amin’izay dia tsy ho faty aho.”*+ 21 Koa hoy izy taminy: “Ekeko koa izany fangatahanao izany,+ ka tsy handrava an’io tanàna nolazainao io aho.+ 22 Mandehana haingana mandositra ao, fa tsy afa-manao na inona na inona aho mandra-pahatonganao ao!”+ Izany no nanaovany ny anaran’ilay tanàna hoe Zoara.+ 23 Ary efa niposaka teo amin’ilay faritra ny masoandro, nony tonga tao Zoara i Lota.+ 24 Ary i Jehovah nandefa solifara sy afo avy tamin’i Jehovah avy tany an-danitra, mba hilatsaka toy ny orana teo amin’i Sodoma sy Gomora.+ 25 Koa noravany ireo tanàna ireo, dia ilay faritra manontolo sy ny mponina rehetra tao amin’ireo tanàna ary ny zavamaniry tamin’ny tany.+ 26 Ary ny vadin’i Lota izay tao aoriany, dia niherika ka lasa vongan-tsira mitsangana.+ 27 Ary i Abrahama nandeha vao maraina nankeny amin’ilay toerana nijoroany teo anatrehan’i Jehovah.+ 28 Dia nitazana an’i Sodoma sy Gomora ary ilay faritra manontolo izy, ka nahita setroka be niakatra avy teo amin’ilay tany, toy ny setroky ny lafaoro fandoroana biriky.+ 29 Ary rehefa nandrava an’ireo tanàna tao amin’ilay faritra Andriamanitra, dia tsaroany i Abrahama, ka nataony izay hamoahana an’i Lota tsy hiharan’ilay fandravana, tamin’izy nandrava an’ireo tanàna tao amin’ilay faritra nonenan’i Lota.+ 30 Ary niakatra avy teo Zoara i Lota taorian’izany, ka nonina teny amin’ny faritra be tendrombohitra niaraka tamin’ny zanany roa vavy,+ satria natahotra ny hipetraka tao Zoara+ izy. Koa nipetraka tao anaty lava-bato izy sy ny zanany roa vavy. 31 Ary hoy ny vavimatoa tamin’ny zandriny vavy: “Efa antitra ity ny raintsika, ary eto amin’ity faritra ity dia tsy misy lehilahy hanao firaisana amintsika araka ny fanaon’ny tany manontolo.+ 32 Koa andao hampisotrointsika divay+ ny raintsika, ary andao isika hanao firaisana aminy, mba tsy ho lany taranaka ny raintsika.”+ 33 Koa nampisotroin’izy mirahavavy divay ny rainy, nandritra iny alina iny.+ Dia niditra ny vavimatoa ka nanao firaisana tamin-drainy, nefa tsy fantatry ny rainy ny fotoana nandrian’ilay zanany na ny nifohazany. 34 Ary nony ampitson’iny, dia hoy ny vavimatoa tamin’ny zandriny: “Efa nanao firaisana tamin’ny raintsika aho halina. Andao hampisotrointsika divay indray izy anio alina. Dia midira ianao, ka manaova firaisana aminy, mba tsy ho lany taranaka ny raintsika.” 35 Koa nampisotroin’izy mirahavavy divay imbetsaka ny rainy, nandritra iny alina iny. Dia lasa ilay zandriny ka nanao firaisana tamin-drainy, nefa tsy fantatry ny rainy ny fotoana nandrian’ilay zanany na ny nifohazany. 36 Ary samy bevohoka tamin-drainy ny zanak’i Lota roa vavy.+ 37 Dia tera-dahy ilay vavimatoa, ka nataony hoe Moaba+ ny anarany. Io no rain’ny Moabita, mandraka androany.+ 38 Ary ilay zandriny koa tera-dahy, ka nataony hoe Ben-amy ny anarany. Io no rain’ny taranak’i Amona,+ mandraka androany.
^ A.b.t.: “ato ambany aloky ny tafontranoko.”